China Amandla Imishini-Mini Ugandaganda ifektri kanye nabaphakeli | RY AGRI
Ugandaganda omncane omncane ulungele amathafa, izintaba, nezindawo ezinamagquma, kuhlanganiswe namathuluzi afanele atholakalayo okulima, ukulima okujikelezayo, ukuvuna, ukutshala, ukubhula, ukupompa, neminye imisebenzi, ukuthutha amabanga amafushane ngama-trailer.
Ugandaganda omncane uyi-drive-drive, kepha une-hydraulic yokuphakamisa naphansi. Ingafanisa kuphela imishini yamapulazi eyingqayizivele namathuluzi, afana nokuhamba ngogandaganda.
Izinzuzo: intengo ephansi futhi kulula ukuyisebenzisa.
1. ingaqhutshwa ngohlelo lwangaphakathi lokudlulisa amandla omlilo wenjini yomlilo, ifakwe injini eyodwa eyisilinda kadizili ,. I-starter kagesi ingasetshenziselwa ukuqala injini, elula kakhulu ukuqala.
2. Isakhiwo esilula, amandla aphansi, alungele indawo encane yokulima. Umshayeli angalawula ukuqondisa kugandaganda, ukudonsa, noma ukushayela ukusebenza kwamathuluzi wezolimo asizayo.
3. Ogandaganda abancane basemapulazini abambalwa bayayibona yonke imisebenzi yogandaganda bezolimo, futhi inkampani yethu iphinde inikeze ngamathuluzi ahlukene ezolimo.
Ugandaganda omncane wasepulazini ungadonsa amageja e-double-shaft ahamba ngendlela eyodwa, amageja amabili, kanye namageja e-disc.
ugandaganda omncane wepulazi ungadonsa ama-tiller rotary kanye nama-disc harrows wokulima okujikelezayo
ugandaganda omncane-wepulazi uxhuma isitshaleli sikakolweni nomtshali wommbila
4 Ukuselela ukusebenza
Ngokuvamile, ogandaganda abasebenza emapulazini amancane bafakwa ama-disk trencher amancane, asetshenziswa kakhulu ekumbeni imisele yokuhambisa amanzi ensimini. Okuningi
5. Ukunisela nokubhula
ogandaganda abancane abasebenza epulazini bahlanganiswe namaphampu wamanzi ahambisanayo nababhuli. Amabhande endiza kadizili axhumene namaphampu wamanzi noma amabhulethi. Amaphampu wamanzi noma amabhulethi aqhutshwa ukuzungeziswa kwama-flywheels wedizili futhi angasetshenziselwa ukunisela nokubhula ukolweni nezinye izilimo.
ugandaganda omncane wepulazi onebhakede lokuhudula ungasetshenziselwa ukuthuthwa kwensimu futhi
2 * 2 isondo
valve ezimbili, ipayipi kabili
amapuleti amabili bamba owomile
Uhlobo lwesondo lokushayela
1.8 * 1.3 * 1.2m
1.9 * 1.3 * 1.2m
Langaphambilini Umtshali Wommbila
Olandelayo: Imishini Yamandla-Ugandaganda